MW:Shariif Xasan iyo Waare oo hadalo kulul oo ka dhan ah DF ku xiray shirki Kismaayo | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta MW:Shariif Xasan iyo Waare oo hadalo kulul oo ka dhan ah DF...
MW:Shariif Xasan iyo Waare oo hadalo kulul oo ka dhan ah DF ku xiray shirki Kismaayo
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo Maanta hadal kooban ka jeedinayey xeritaankii Shirkii golaha Iskaashiga Dowlad goboleedyada ayaa waxa uu soo bandhigay dhibaatada ugu daran ee xiligaan heysata bulshada Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Shariif Xasan ayaa sheegay in dadka degaannada Koofur Galbeed ay ku dhib qabaan waddooyinka xiran iyo Amni darada ka taagan wadada xiriirisa Baydhabo iyo Muqdisho waxaana uu dowladda ka codsaday in ay fuliso ballamihii hore ee ahaa in la furo waddooyinka muhiimka ah.
Al-shabaab ayaa maanta labo weerar ka kala geystay degaannada Makuuda iyo wada isku xirta Baydhabo iyo Buurhakaba iyo Sabbuun oo ka kala tirsan Gobollada Bay iyo Shabeellaha dhexe waxaana ku dhintay Ciidamo ka tirsan Dowladda Soomaaliya.
” Anaga dhibka ugu badan waxuu inaga heystaa Jidka Muqdsho Baraawe Muqdisho Baydhabo. Waxaan u baahanahay in laga shaqeeyo sidii dhulkaa loo xoreeeyn lahaa. Dowladana waxaan ka sugeynaa iney garowsato waxa wadanka ka jira”
Madaxweynaha Maamulka Hirshabeelle oo hadlayay kaddib shirkii Kismaayo ugu soo gaba gaboobay ayaa sheegay in shacabka degaannada Hirshabeelle ay kula xisaabtamayaan amaanka waddada u dhaxeysa Balcad iyo Jowhar,isaguna uu ka codsanayo dowladda Federaalka ah in ay waddadaas u furto.
Waxaa uu sheegay in marka Dadka Hirshabeelle ay codsi weydiistaan isaga uu isaguna dowladda Federaalka ah weydiisanayo in ay howshaasi qabato.